China Steel Kuvunguza ezitebhisini ifektri abakhiqizi | Honghua
Kuyisitebhisi sensimbi esivunguza ngezitebhisi. Amalungu ensimbi ashiselwe ngamacwecwe ngobukhulu obungu-20mm. Lesi sinyathelo sensimbi siseHuawe Sakata Base.
Kuyisitebhisi sensimbi esivunguza ngezitebhisi. Amalungu wensimbi ashiselwe ngamacwecwe ngobukhulu obungu-20mm. Lesi sinyathelo sensimbi siseHuawe Sakata Base.
Langaphambilini Isakhiwo sensimbi sezitezi eziningi zokuhlala
Olandelayo: Isakhiwo sehholo lezemidlalo